Kutaurirana Nzira Yako Kuti Ubudirire | Martech Zone
NeChishanu, Kurume 12, 2010 Svondo, Nyamavhuvhu 19, 2012 Ellen Dunnigan
Vanachiremba vanovhiya mupfungwa kugadzirira kuvhiyiwa. Vatambi mupfungwa gadzirira mutambo mukuru. Iwe, zvakare, unofanirwa kutora psyched nezve yako inotevera mukana, yako hombe yekutengesa kufona kana mharidzo parizvino.
Kukura hunyanzvi hwekutaurirana inokuisa parutivi kubva pane imwe pasuru. Funga nezve hunyanzvi hupi hwaunoda:
Mahunyanzvi Ekuteerera Matekiniki - Iwe unonyatso kuziva izvo zvinodiwa nemutengi wako uye nei? Chii chinonzi kurwadziwa kwake? Unogona kuzvinzwa here pane zvaanotaura uye nematauriro aanozviita?
Toni-Kuisa Muviri Mutauro - Unoziva here nguva yekuratidzira mutumbi wemutengi wako? Mitauro yako yemuviri inoisa toni yekutaurirana zvirinani kana kuwanda kakawanda nemutengi wako?
Yakarurama-Kurudyi Intonation uye Chiyero chekutaura - Iyo nzira yaunotaura inokurudzira simba uye chiito kubva kumutengi wako? Kana iwe unowana yako mutengi achikukurwa achienda kune imwe misoro kana kufinhwa neako chigadzirwa / sevhisi? Ko mutengi tora kuti chigadzirwa chako kana sevhisi inogadzirisa kurwadziwa kwake?
Inesimba, Inokurudzira Inzwi Kudzora - Unonzwika kuva nesimba here? Inzwi rako rinoisa vanhu kurerukirwa kuti vakuvhurire vakasununguka kwauri nezvekurwadziwa kwavo? Kana iwe unonzwika kusagadzikana, kutya, kusagadzikana, kuchena, kunonoka, kana kufinhwa?
Iwe unotoziva meseji iwe yaunoda kuti mutengi wako anzwe. Ndicho chikamu chiri nyore. Uye zvisinei kuti iwe unotaura kangani yako 60-yechipiri pombi kana kuenda kuburikidza neyako yekutengesa zvinhu, kune vanhu vasingazobatana neiyo meseji; havangodaro zvitore. Chimwe chezvikonzero ndechekuti, kazhinji, meseji yako inozongonzwikwa chete kana ZVINOTAURWA uye MAZWI aunotaura kuti zvinoenderana.
Matauriro aunoita meseji yako anoita mutsauko wese
Uye kune hunyanzvi kune izvi. Usati waenda kune iyo huru inotevera kudana, funga nezvekunzwa iwe kwaunoda kusiya nemutengi wako; manzwiro aunoda kugovana. Semuenzaniso, funga kuti iwe ungangoda kutanga neinodziya, ine hushamwari meseji uye uteedzere ine chivimbo, chine simba, kana chine simba meseji.
Kunzwa kwega kwega kwaunoda kuratidza kunogona kuratidzwa na
Mufananidzo wepfungwa kana mufananidzo
Kufananidza mutauro wemuviri
Gadzirira kufona kwako nekuita chokwadi kuti maitiro ako ekutaurirana (iyo HERE) anoenderana neshoko rako. Kutanga neshoko rinodziya, rine hushamwari:
Funga nezwi rakakosha rinomutsa hushamwari, hushamwari manzwiro: nyoro, kudzikama, kupenya kwezuva, kugadzikana. Dzokorora iro rimwe izwi rakakosha kwauri kakati wandei nekusimbisa kusvikira iwe uchinzwa.
Fungidzira mufananidzo wepfungwa. Fungidzira uchimbundira mwana kana murume / mukadzi wako, uchimonera mugumbeze nepanzvimbo yemoto, uchifamba nemumhenderekedzo yezuva rakajeka. Ita kuti mufananidzo uve wakajeka uye wakajeka.
Chinja ruzha rweizwi rako nekuchinja muviri matauriro uye kuiswa. Kunyemwerera. Taura zvinesimba nesimba. Fambisa. Ita mafambiro ako BIG.
Uye kuenderera nesimba uye pesvedzero:
Funga nezve kiyi izwi rinomutsa pfungwa yesimba uye pesvedzero: yakasimba, yakasimba, ine chivimbo
Fungidzira iwe nenzira yakadaro. Fungidzira kuva mukurumbira wenyaya, kana mukurusa pane varairidzi vese, mutungamiri akapfeka yunifomu, NYANZVI achitaura nevateereri akanamira pazwi rako rega. Iye zvino fungidzira iwe uchipa yako yakatarwa meseji. Zvifungidzire iwe wakadzikama, mukutonga, munzvimbo.
Mutauro Wemuviri: Kana iwe uchida kuve nesimba uye zvine simba, simuka. Mamiriro akakwana. Shandisa simba remaoko. Usafamba-famba zvakanyanya. Chengetedza maziso akanaka. Usatarise zvinhu zviri mumba; vanhu chete. Kana uchitaura parunhare, usarega maziso ako achidzungaira. Tarisa kumeso nemufananidzo wemunhu… taura naye.
Kusimbisa PaBhizinesi muvambi uye CEO Ellen Dunnigan murairidzi anozivikanwa-uye anoratidzirwa aine hunyanzvi hwekudzidzisa muizwi, kutaura, uye chiRungu. Anobata dhigirii remasters muSpeech-Mutauro Pathology uye ave akasimbiswa sekiriniki inokwanisa neAmerican Speech-Mutauro Wekunzwa Association.